कक्षा कोठामै हेड सरकारको मिससँग ‘लाजमर्दो मस्ती भिडियो बन्यो भाइरल भएपछि पुग्यो शिक्षा मन्त्रीसँग भिडियो सहित) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारकक्षा कोठामै हेड सरकारको मिससँग ‘लाजमर्दो मस्ती भिडियो बन्यो भाइरल भएपछि पुग्यो शिक्षा मन्त्रीसँग भिडियो सहित)
कक्षा कोठामै हेड सरकारको मिससँग ‘लाजमर्दो मस्ती भिडियो बन्यो भाइरल भएपछि पुग्यो शिक्षा मन्त्रीसँग भिडियो सहित)
November 28, 2020 admin समाचार 1950
प्रेम सबैले गर्छन् । तर प्रेममा परियो भन्दैमा जहाँ पायो त्यहि मस्ती गर्न खोज्दा नमज्जाले लाजमर्दोमा परिन्छ पनि । यस्तै भएको छ एक सरकारी विद्यालयका डेड सरलाई ।
यो कुनै ए’डल्ट फिल्मको दृष्य होइन । यो लाजमर्दो भिडियो एक सरकारी स्कुलको कक्षा कोठाको हो । भिडियोमा कक्षाकोठाभित्रै प्रधानाध्यापक र एक शिक्षिका अ’श्लील हर्कत गरिरहेका देखिएका छन् । गुजरातको दाहोद जिल्लाको संजेली क्षेत्रको बताइएको छ ।
यो भिडियो कसैले पछाडिबाट खिचेर भाइरल बनाई दिएको थियो । भाइरल भिडियोको विषयमा शिक्षा अधिकारी र शिक्षा मन्त्रीसँग उजुरी गरिसकिएको बताइएको छ । भिडियो सार्वजनिक भएपछि स्थानीय आक्रोशित छन् । भिडियोको वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रशासनले अनुसन्धान कमिटी बनाएको बताइएको छ । भिडियो
हार्दिक बधाई ! नन्दराजले खुट्टाले लेखेरै मास्टर्स डिग्री…हेर्नुहोस् । सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।
६४ वर्षीय वृद्ध अम्बिका भन्छिन- मेरो छोरालाई गो’ली हा’न्‍ने अधिकार कसले दियो ?
काठमाडौमा अस्पतालको पाँचौ तलावाट टेकेको रड खुस्किएर ख,सेर महिलाको मृत्यु
December 23, 2020 admin समाचार 1289
काठमाडौ / चुच्चेपाटीस्थित स्तूपा अस्पतालको निर्माणाधीन भवनको पाँचौँ तलाबाट ख,सेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिन्धुली घर भई सोही भवनमा ज्यामी काम गर्ने अन्दाजी ३५ वर्षीया निरुता तामाङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। निर्माणाधीन
हराएकी १४ बर्षिया छोरीको मोबाइलमा आएको त्यो म्यासेज जसले आमाबाबु छक्क परे ‘
November 21, 2020 admin समाचार 2922
टीकापुर । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–३ की १४ वर्षीया एक बालिका गएको कात्तिक १९ गते घरबाट बेपत्ता भएपछि परिवारमा चिन्ता छायो । परिवारका आफन्तले सानै उमेरकी छोरी कतै साथीकहाँ गएकी होलिन् भनेर दुई दिनसम्म खोजे, भेटेनन्
OMG….श्रीमान अफिस गएको बेला श्रीमतीले घरमै परपुरुषसँग मस्ती गर्दा…..
November 7, 2020 admin समाचार 4566
काठमाडौ । विवाहेत्तर सम्बन्धका कारण धेरैका घरमा समस्या आएका छन् । आफ्नो परिवारसंग सन्तोष नभएर अर्कालाई ता क्दा एक पुरुषको ज्यान गएको छ । श्रीमान नभएको बेलामा अर्का पुरुषलाई घरमै बोलाएर रोमान्स गरेकै बेलामा श्रीमान
LEX 18 agenda conversation: Job club (486420)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458523)
Hello world! (384520)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (352027)